Farmaajo: Waa Been Abuur in aan Iri Xamar ayaa Taangi AMISOM Lagu Joogaa | Anti-Tribalism
BANAADIR STATE →
Farmaajo: Waa Been Abuur in aan Iri Xamar ayaa Taangi AMISOM Lagu Joogaa
Ra’iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Abdilaahi Farmaajo ayaa been abuur aan geed loogu soo gaban ku tilmaamay war dhawaan lagu faafiyey qaar ka mid ah website-yadda Soomaalida ee ahaa inuu Xamar ku sheegay meel lagu joogo TAANGI oo aysan jirin cid danbe oo xilka madaxtinimada isaga heysaneysa.
Maxamed Abdilaahi Farmaajo oo aan qadka telefoonka kula xiriiray isaga oo jooga wadanka Mareykanka ayuu sheegay inuusan dhihin warka laga faafiyey islamarkaana uu ku tilmaamay mid ay wadaan dad cadow ku ah horumarka iyo magaca xukuumaddii TAYO.
” Aniga Farmaajo ah ma dhihin hadalka ah in aan ku tilmaamay Xamar meel lagu joogo TAANGI AMISOM, Xamar waa caasimadii dalka waana xaruntii Dowlada Soomaaliyeed ee aan bilooyin ka hor joogay aniga, Marna lagama yaabo in aan hadalkaasi la sheegay ku aniga ku hadlo. Xamar waxaan u aqaan meel ay ka taliso Dowlada Somaaliya, AMISOM waxay u joogtaa waa rabitaanka iyo talada Dowlada Soomaaliyeed” Ayuu yiri Ra’iisul Wasaarihi hore ee Soomaaliya Maxamed Abdilaahi Farmaajo.
Dhinaca kale waxaa uu sheegay inuusan ku tilmaamin inay xukunka xoog ku heystaan sida lagu sheegay qoraalka been abuurka ah ee laga faafiyey Farmaajo .
” Waxaa ay sheegeen in aan beelo Soomaaliyeed ku eedeeyey inay xukunka iyaga un heystaan, Taasi waa been iyo qorshe lagu doonayo in sharafteeyda meel looga dhaco. Ma ihi nin qabiil mana ihi nin dhaqan u leh qabyaalada soomaalida qaar dilootay. Waxaan leeyahay ummada Soomaaliyeed waa ii siman yihiin waxaana u arkaa wadajirkooda muhiim. Qolada beenta sheegeysa waxaan leeyahay Farmaajo iyo Shacabka waa isyaqaanan oo igama filanayaan in qabiilada soomaaliyeed aan eedeeyo midkoodna.” Ayuu mar kale yiri Farmaajo oo ka careysan beenta laga faafiyey.
Waxaa uu sheegay in xukunka siyaasada Soomaaliya ay cidkasta xaq u leedahay islamarkaana uu isaga ka mid yahay dadka Soomaaliyeed ee qaban kara xilalka qaranka,balse taasi aysan jirin maanta cid uu ku eedeeyo. isaga oo intaasi raaciyey inay Madaxda Dowlada oo uu ugu horeeyo Shiikh Shariif Shiikh Axmed iyo Abdiwali Gaas ay yihiin saaxiibo isku dhaw oo aysan u dhexeyn wax cadaawad ah.
Laakiin waxaa uu mus la korey oo uu Soomaalida ugu baaqay inay iska qabtaan wakiilka QM u qaabilsan Soomaaliya Mr, Mahiiga isaga oo ka hadlaya waxa uu yiri .
” Mahiga waxa uu inoola mid yahay safiirka soomaaliya u jooga QM si midaasi la mid ah waa in madaxda iyo Ummada Soomaaliyeed u fahmaan oo ay ula dhaqmaan sida Safiir oo kale oo aysan u qaadin inuu isaga u yeerin karo masiirkooda iyo aaya katalinta ummada Soomaaliyeed,
Waxaan ku baaqayaa in la badelo Mahiga maadaama uu faraha la soo galay Culumada Somaliyeed gef weyn u geystay Diinta islaamka ” Ayuu yiri Ra’iisul wasaarihii hore ee Somaaliya Mr,Farmaajo.
Farmaajo aya waxaa uu shegay in Mahiga Howlaha lo xilsaaray aysan ku jirin in uu soo Faragashto qaybaha kala duwaan ee Culumada Somaliyeed marka laga reebo kooxda Al-shabaab oo ayadu ah koox falaago ah diidana in Somalia ay ka dhalato Nabad waarta.
Sidoo kale haweenka Soomaaliyeed ayuu hambalyo ku aadana maalinta haweenka usoo diray waxaana uu sheegay in haweenka lafdhabar u yihiin jiritaanka bulshada,waxaana uu ku baaqay in laga qeybgeliyo haweenka dadaalada nabada loogu raadinayo Soomaaliya taasi oo uu ku sheegay inay waxbadan kusoo kordhin karaan.
Ugu danbeyntii Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Abdilaahi Farmaajo ayaa uga digay warbaahinta inay faafiyaan wararka aysan hubin kuwaasi oo ku keeni kara dhibaato bulshada iyo dadka iyaga sida gaarka ah ula socda. Waxaana uu taasi badelkeeda ugu baaqay inay wixii war ah ee dhankiisa ah isaga kala soo xiriiri karaan haddii ay doonayaan inay helaan xaqiiqda warka beenta ah ee la faafinayo.
Wararka uu beeninayo Farmaajo ayaa ahaa kuwa baryahanba bulshada ay hadal heysay balse u muuqday hadal ka duwan kuwii looga bartay Farmaajo,iyaddoo taasina ay maanta meesha ka baxday kadib beeninta uu arrintaasi ka muujiyey.
Ma ihi nin qabiil mana ihi dhaqan u leh qabyaalada Soomaalida qaar dilootay ayuu yiri Formaajo bal halkaan ka aqri buugiisa :
Posted on March 17, 2012, in Anti-Tribalism. Bookmark the permalink.	Leave a comment.